81 Xaaldo Cusub oo COVID-19 Ah Oo Dalka Laga Diiwaan Geliyay | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home Wararka HNN 81 Xaaldo Cusub oo COVID-19 Ah Oo Dalka Laga Diiwaan Geliyay
81 Xaaldo Cusub oo COVID-19 Ah Oo Dalka Laga Diiwaan Geliyay
Baladweyne(HNN)- Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS) ayaa xaqiijisay in 24-kii saac ee lasoo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay 81 xaaladood oo COVID-19 ah, taas oo ka dhigeysa tiradii ugu badneyd ee maalin qura dalka laga helo. 5 ruux ayaa ka boqsootay, mana jiro bukaan u geeriyooday.
Bukaannda cusub 50 ayaa rag ah 31-na waa haween. Tirada xaaladaha COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 1,170, Geeridu waxay mareysaa 52 , waxaana guud ahaan ka bogsooday 126 ruux.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabelle oo ka qeyb galay kulan dhinaca Internet-ka ah
Next articleHaweeneyda ugu da’da weyn dalka Spain oo ka bogsatay Corona Virus